Salohy Randriafanomezantsoa · Septambra 2019 · Global Voices teny Malagasy
Salohy Randriafanomezantsoa · Septambra, 2019
Lahatsoratra farany an'i Salohy Randriafanomezantsoa tamin'ny Septambra, 2019
Mediam-bahoaka09 Septambra 2019
(Lahatsoratra tamin'ny volana May 2005) Nanolotra manontolo ny fandaharany faharoa ny Zoma ho an'ny Global Voices ny Radio Open Source, fandaharana vaovao amin'ny onjam-peo ho an'ny daholobe natolotr'i Chris Lydon avy any Cambridge, Massachusetts. Nahitana ny resadresaka tamin'ny finday niaraka tamin'ireo bilaogera Hossein Derakhshan (Hoder), Ndesanjo Macha, Dina Mehta, Steve...
Fahafahana ho an'ny hafa sy ho ahy
Mediam-bahoaka04 Septambra 2019
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Oktobra 2014) Te-hanoratra sy haneho ny hevitro amin'ny alàlan'ny hafa aho. Hitako tamin'ny fikarohana tao amin'ny google ny GV. Fantatro fa tsy ampy fahalalana momba ny asa fanoratan-gazety aho ary mila izany ary mbola mila zavatra betsaka ianarana. Nanapa-kevitra ny hifandray tamin'ny Global Voices aho noho...